C/raxmaan C/shakuur "Guddiyadii doorasho waxaa loo soo xulay xubno ka tirsan NISA" -
Home News C/raxmaan C/shakuur “Guddiyadii doorasho waxaa loo soo xulay xubno ka tirsan NISA”
C/raxmaan C/shakuur “Guddiyadii doorasho waxaa loo soo xulay xubno ka tirsan NISA”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa xubnaha Guddiyada doorashada ee Galmudug iyo Hirshabelle ay ka mid yihiin Hey’adda Nabadsugida Qaranka ee NISA.
C/raxmaan C/shakuur ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya aysan maanta ku qabin kalsooni buslhada Soomaaliyeed, taas bedelkeed dadka loo soo xulayo Guddiyada ay ka tirsan yihiin Taliska NISA.
“Inta badan xubnaha labada guddi doorasho ee laga soo magacaabay Hirshabele iyo Galmudug waa xubno ka tirsan hay’adda Nabadsugidda Qaranka, waxaana badankood laga soo magacaabay xafiiska taliyaha nabadsugidda”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur Warsame.
Sidoo kale waxaa uu xusay in xubnaha Guddiga heer Federaal ay badankood yihiin taageerayaasha baraha bulshada ee Madaxweyne Farmaajo.
“Guddiga heer Federaal uu badankiisa yahay taageerayaashii baraha bulshada ee Madaxweyne Farmaajo, waxaana soo xulay agaasime ku xigeenka Xafiiska madaxweynaha. Suuragal maaha in masiirka Dalka iyo doorashada deegaanka aan dadkiisa metelno ay ka arrimiyaan labo wiil oo ilma adeero ah”ayuu yiri mar kale C/raxmaan C/shakuur.
Dood iyo hadal heyn ayaa ka taagneyd xubnaha loo magacaabayay Guddiyada doorasho heer Federaal iyo heer dowlad Goboleed, iyadoo xubnaha ka dhex muuqday ay isugu jireen shaqaale ka tirsan hey’adaha dowladda.
Previous articleSIMAD oo u dabaal degtay sanad-guurada 21aad ee aas aaska Jaamacadda
Next articleKeydad hub ay lahaayeen Tigreega oo duqeyn lagu burburiyay